Plus-Size ကြိုးမဲ့ချောမွေ့စွာအားဖြည့် Push Up အားကစားဘရာများကိုအခမဲ့ - အခမဲ့ & အခွန် | WoopShop®
အားကစားဘရာစီယာများပေါင်းစုံပါ ၀ င်သည့်ကြိုးမဲ့ချောမွေ့စွာပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
အရောင် အသားအရေ ခရမ်းရောင်နု နီသော မီးခိုးရောင် အနက်ရောင် အဖြူ ခရမ်းရောင်ခ အနီရောင်ခ အပြာရောင် B အနက်ရောင် B အသားအရေ B အရေပြား B 1 အဖြူ B ကို
ခညျြအနှော Size ကို 5XL 6XL 3XL 4XL L XL S M 2XL
အရေပြား / 5XL အရေပြား / 6XL အရေပြား / 3XL အရေပြား / 4XL ခရမ်းရောင် / L ခရမ်းရောင် / XL ခရမ်းရောင် / S ခရမ်းရောင် / M ခရမ်းရောင် / 4XL ခရမ်းရောင် / 5XL ခရမ်းရောင် / 2XL ခရမ်းရောင် / 3XL အနီရောင် / M က အနီရောင် / L ကို ခရမ်းရောင် / 6XL အနီရောင် / S က အနီရောင် / 3XL အနီရောင် / 4XL အနီရောင် / XL အနီရောင် / 2XL မီးခိုးရောင် / S မီးခိုးရောင် / M အနီရောင် / 5XL အနီရောင် / 6XL မီးခိုးရောင် / 2XL မီးခိုးရောင် / 3XL မီးခိုးရောင် / L မီးခိုးရောင် / XL မီးခိုးရောင် / 6XL မီးခိုးရောင် / 4XL မီးခိုးရောင် / 5XL အနက်ရောင် / M က အနက်ရောင် / L ကို အနက်ရောင် / S က အနက်ရောင် / 3XL အနက်ရောင် / 4XL အနက်ရောင် / XL အနက်ရောင် / 2XL အဖြူ / S က အဖြူ / M က အနက်ရောင် / 5XL အနက်ရောင် / 6XL အဖြူ / 2XL အဖြူ / 3XL အဖြူ / L ကို အဖြူ / XL အဖြူ / 6XL အရေပြား / S အဖြူ / 4XL အဖြူ / 5XL အရေပြား / XL အရေပြား / 2XL အရေပြား / M အရေပြား / L ခရမ်းရောင် B ကို / 6XL အနီရောင် B / 6XL အပြာ B / S ကို အနီရောင် B / 4XL အနီရောင် B / 5XL အနီရောင် B / 2XL အနီရောင် B / 3XL အနီရောင် B / L ကို အနီရောင် B / XL အနီရောင် B / S အနီရောင် B / M အနက်ရောင် B / 5XL အနက်ရောင် B / 6XL အနက်ရောင် B / 3XL အနက်ရောင် B / 4XL အနက်ရောင် B / XL အနက်ရောင် B / 2XL ခရမ်းရောင် B ကို / 4XL ခရမ်းရောင် B ကို / 5XL ခရမ်းရောင် B ကို / 2XL ခရမ်းရောင် B ကို / 3XL ခရမ်းရောင် B / L ကို ခရမ်းရောင် B / XL ခရမ်းရောင် B / S ခရမ်းရောင် B / M က အပြာ B / 5XL အပြာ B / 6XL အပြာ B / 3XL အပြာ B / 4XL အပြာ B / XL အပြာ B / 2XL အပြာ B / M က အပြာ B / L ကို အနက်ရောင် B / M က အနက်ရောင် B / L ကို အရေပြား B / 6XL အနက်ရောင် B / S အရေပြား B / 4XL အရေပြား B / 5XL အရေပြား B / 3XL အရေပြား B ကို 1 / S ကို အရေပြား B ကို 1 / M က အရေပြား B ကို 1 / L ကို အရေပြား B ကို 1 / XL အဖြူရောင် B / 3XL အဖြူရောင် B / 4XL
Plus-Size ကြိုးမဲ့ချောမွေ့စွာအားဖြည့်အားကစား Bras - အရေပြား / 5XL backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ဘရာစီယာပုံစံ: One-Piece, Push Up, Padded
သိုင်းကြိုးအမျိုးအစား: Non-adjust Straps, Non-Convertible Straps
ကြိုးမဲ့ကြေးဝါ - Plus အားချောမွေ့သော Bra
Push Up Bra: လက်ဆွဲဘရာနှင့်အတူ
Plus အား Bra: ချည်မှုတ်နိုင်သောဘရာ
အလွန်ကောင်းပါတယ် Threads ထွက်ကပ်မထားဘူး။ အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ 11.11.20-came 01.12.20 - စတိုးမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Tash full .... ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း og5တွင် 115XL အမိန့်ပေးခဲ့သည် .... ရေနစ်သေဆုံး! ပြီးပြည့်စုံစလစ်၏အရွယ်အစားနှင့်အတူ။ အဘယ်သို့အရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်။ ခန္ဓာကိုယ်ရန်အလွန်သာယာသောဖြစ်ပါသည်, အပ်ချုပ်ကောင်းပါတယ်။ ငါသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား 10 စင်တီမီတာအဘို့အစမတ်ကြိုးပိုကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်အဘို့အပြန်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်
52-54 မှာ 3XL တက်လာ !!! ကောင်းစွာဆန့်, သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်
အရည်အသွေးသာယာသောဖြစ်ပါတယ်။ တွင်ရုရှား 46-48 အရွယ်အစား XL ယူ။ ကောင်းစွာသွား၏။ ဘေးတိုက်ရှိတစ်နေရာတည်းတွင်ကြိုးများကိုဖယ်ရှားသော်လည်းအရေးကြီးသည်၊ ဖယ်ရှားပါ။ အပိုဆုသည်ရော်ဘာကြိုး ၂ ချောင်း၊ ချည်နှောင်ခြင်းခံရသော်လည်းကောင်းသည်)))) အလွန်လျှင်မြန်စွာရခဲ့ပြီး ၂ ပတ်ကျော်ကျော်မော်စကိုသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အရောင်အားဖြင့်၎င်းသည်မီးခိုးရောင်မဟုတ်သော်လည်း lilac သို့မဟုတ်တစ်ခုခုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာတည်ရှိသည် (ယေဘုယျအားဖြင့်ပုံတွင်ကဲ့သို့) သို့သော်အရောင်သည်လှပသည်။
မြန်မြန်ရပြီ သုံးပတ်အတွင်း Altai မှ။ ကြီးမားသောရင်ဘတ်သည်မူအရ မူတည်၍ မမျှော်လင့်ဘဲနောက်ကျောကိုဆွဲယူထားသည်။ og 138 စင်တီမီတာအပေါ်ကိုယူ။ အိုကေပါတယ်